Axmed Taaran oo loomagacaabay xoghayaha guud ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland - calanka.com
Axmed Taaran oo loomagacaabay xoghayaha guud ee Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland (Calanka.com) - Posted at 28/04/2013 By Jabra
Wareegto kasoobaxday xafiiska madaxwaynaha maamulka puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole ayaa lagu magacaabay Axmed Maxamed Yuusuf oo loo yaqaan Axmed Taaran kana mid ahaa mucaaradka puntland in uu noqdo xoghayaha guud ee Rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland.
Munasibad loogu talagalay in axmed taaran xilka loogu wareejiyo ayaa maanta waxa ay kadhacday xarunta rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland waxana goobjoog ka ahaa qaar kamid ah masuuliyiinta rugta ganacsiga iyo waliba ganacsato kadiiwaan gashan xarunta rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland.
Ugu horayn waxa munaasibada kahadlay gudoomiye kuxigeenka koowaad ee rugta maxamed caydiid oo sheegay in munaasibadan ay tahay mid kusaabsan xilwareejin xoghaye guud .
''Waxa uu madaxwayanaha puntland digreeto kusoo magaacabay Axmed taaran oo uu usoo magacabay xoghaye guud isaga oo kaduulayo madaxwaynuhu xeerka lambarkiisu yahay 83 ee soobaxay 23-4-2013 kunasaabsan magacaabis markuu arkay madaxwaynuhu dastuurka puntland markuu sidookale arkay aqoonta iyo waayo aragnimada axmed taaran waxa uu umagacabay xoghayaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland''Sidaasi waxa yiri gudoomiye kuxigeenka koowaad ee rugtaganacsiga Maxamed Caydiid.
Waxaa kale oo goobta iyana ka hadlay masuuliyiin kale oo ka tirsan Rugta Ganacsiga kuwaas oo tilmaamay in xoghayaha cusub ay ugu hambalyeynayaan xilka loo magacaabay iyagoona ubalanqaaday in ay siwanagsan ula shaqayn doonaan.
Axmed Maxamed Yuusuf Axmed Taaran oo lagu wareejiyay xilkan isla maanta ayaa saxaafada u sheegay in uu ku faraxsanyahay xilka loo magacaabay islamarkaana uu ka rajeynayo xubnaha Rugta ganacsiga Puntland.
Sidaan oo kale madaxwayne faroole waxa uu xilalal ugu magacaabay Amiin Xaaji khayr oo uu umagaacabay Agaasimaha guud ee duulista hawada iyo waliba ina Aloore oo uu isna umagacabay taliye kuxigeenka ciidanka Asluubta puntland .